ကိတ် Middleton မင်းသမီး Charlotte သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းပုံတူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်နေသောသူတို့ကိုပရိတ်သတ်တွေဆက်ဆက်ကိတ် Middleton ဝါသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သူတို့ထဲကတစျခု Duchess နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကကျွမ်းကျင်သည့်ဓာတ်ပုံများ၏အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ကိတ်အခါအားလျော်စွာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၏တောက်ပပြီးလှပပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များလုယူကတည်းက။ ငယ်မင်းသမီးလေး Charlotte - ဥပမာအားဖြင့်, မနေ့က Middleton မိမိသမီး၏ဓါတ်ပုံများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ။
ကျောင်းက Charlotte မှာပထမဦးဆုံးနေ့က
အများစုမှာမကြာသေးမီက, စာနယ်ဇင်းပု Duke နဲ့ကိန်းဘရစ် Duchess ဘုရင်အတွက်တိုနီ Willcocks ပျိုးခင်းကျောင်းဟုခေါ်တွင်သောအထူးပြုပျိုးခင်းကျောင်း, ရန်သူ၏သမီး Charlotte ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျောင်းကပထမဦးဆုံးနေ့က Middleton Charlotte ခရီးအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းသောဓာတ်ပုံများဖြင့်စီရင်တော်, ထိုမိန်းကလေးသည်အလွန်မင်္ဂလာရှိ၏, ထိုမင်းသမီးကဒီမှာသင်ခန်းစာများနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှုများတစ်ပါတ်တက်ရောက်သိရနှင့်နေသည်။ သူမကကျောင်း left နှင့်ခြေလှမ်းများကာလအတန်ကြာလာသောအခါကိတ်, သူ၏သမီး၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူ။ မိန်းကလေးတွင်, မျှော်မှန်းထားသည်အဖြစ်ကကျောပိုးအိတ်တူညီတဲ့လေသံဖိနပ်နှင့်သင်တန်း၏, ထူသောအထည် burgundy တစ်ကုတ်အင်္ကျီကိုတှေ့မွငျနိုငျသညျ။
ကကိတ်နဲ့ William Charlotte တစ်အထူးပြုကျောင်းမှပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်တစ်လအကြာအကြောင်းကိုသတိရပါ။ Kensington နန်းတော်များ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်, မင်းသမီး Charlotte2မှ3နှစ်အထိထံမှကလေးများကု သ. မရသောအရာအထူးအဖွဲ့တက်ရောက်မည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Willcocks ပျိုးခင်းကျောင်းမှာအတန်းပေါင်းများစွာအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ နံနက်ကျောင်းကလေးတွေဟာစာဖတ်ခြင်း, စာရေးခြင်းနှင့်အတွက်အချက်နားမလည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ 12 မွန်းတည့်မှနံနက်9ကနေကျင်းပဒီကျောင်းမှာဌာနခွဲအတွက်အတန်း။ Next ကို Charlotte အတန်းသို့သော် 12 ကနေ 15 မှကျင်းပကြသည်ဘယ်မှာနေ့လည်စာကလပ်, မဟုတ်နေ့တိုင်းသွားရောက်များနှင့်တနင်္လာနေ့, သောကြာနေ့နှင့်ကြာသပတေးပေါ်မှာ။ ကျောင်း၏ဤဌာနခွဲ, ကျောင်းသားများအနုပညာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးသင်ခန်းစာများမှမိတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နေ့လည်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါသည် - သမိုင်း, အနုပညာ, ဂီတနှင့်ပြင်သစ်အထူးပြုတဲ့ဌာနခွဲ။
မင်းသမီး Charlotte နှင့်ကိတ် Middleton
Kensington နန်းတော်မင်းသားလူးဝစ်နှင့်မင်းသမီး Charlotte သစ်ပုံရိပ်တွေထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
ပြန်လည်သိမ်းဆည်း, ကိတ် Middleton ထပ်တလဲလဲမင်းသမီး Charlotte နှင့်မင်းသားဂျော့ခ်ျ၏ပုံတူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ သူတို့ပထမဦးဆုံးမွေးနေ့ကျင်းပသည့်အခါဒါဟာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေ၏အကြီးအကဲဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကင်းဘရစ်၏ Duchess နဲ့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးအတွက်အကြိမ်ကြိမ်သည်ဤစကား said:
"ငါထကြီးထွားလာငါ့သားသမီးများ၏ကင်မရာအထင်ကရအချိန်လေးအပေါ်ကိုဖမ်းယူနိုင်မအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ ငါ့အဘို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစု၏အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည်အတိုင်း, အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ငါအဲဒီပုံရိပ်တွေပစ္စုပ္ပန်, မစိတ်ကူးယဉ်ဘဝအကွောငျးပွောကြောင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ငါ့သားသမီး, တတ်နိုင်သမျှသဘာဝအလျောက်ကိုကြည့်လုပ်စမ်းပါ။ "
အဆိုပါ biennium များအတွက် Charlotte ၏ပုံတူ
မင်းသမီး Charlotte ၏သစ်ကိုပုံတူသတင်းစာ၌ထငျရှားပြီးနောက်, Duke နဲ့ကိန်းဘရစ် Duchess ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်သစ်ကိုဓါတ်ပုံသည်ဤစကား said:
သူတို့ဂျော့ခ်ျနှင့် Charlotte လေးစားရှိရာ "ကိတ်နဲ့ William, သူ့ပရိတ်သတ်တွေကနေစာလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Duke နဲ့ Duchess မင်းသမီး Charlotte ၏မိဘများနှင့်တူသောလူကဲ့သို့လည်းမနေ့ကထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်သောအရာအသစ်ကဓါတ်ပုံ, မျှော်လင့်နေကြတယ်။ "
Alec Baldwin နှင့် Hilaria တတိယအကြိမ်မိဘများဖြစ်လာခဲ့သည်
Hayden Panettiere တဲ့ Carl ရဲ့ Jr ကြော်ငြာမှာ curvy ပုံကိုပြသ
ပဲရစ်ဂျက်ဆင်ခြေသည်း Macaulay Culkin လုပ်
ဆုချီးမြှင့် iHeartRadio ဂီတဆုပေးပွဲအများအပြားနာမည်ကြီးတွေဆွဲဆောင်
ဒါကိုတာဂျွန်ဆင်နှင့်ဂျေမီ Dornan တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်မဟုတ်လော
Kylie Jenner မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ဇိမ်ခံနေအိမ်ငှားရမ်းပြီး swimsuit အတွက်လင်းလင်းဓါတ်ပုံကိုယူထားပါတယ်
ဗြိတိသျှမီဒီယာပြောဆိုချက်ကိုကိတ် Middleton ရင်သားကိုကျယ်
အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲ, "ခရစျတျော၏စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ": ဘာအသစ်တစ်ခုကို Mel Gibson ရုပ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ Kendall Jenner - ဒီမျှဟာသပါ!
ဂျိမ်း McAvoy နဲ့ Lisa Liberati အသည်းအသန်ကိစ္စ
စယ် Crow ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကသူ့ပရိတ်သတ်တွေကြောက်လန်ထက်အလေးချိန်ပေါ်တွင်တင်နေသည်
အဆိုပါကုမ္ပဏီ Tommy Hilfiger ဖက်ရှင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းချဲ့ထွင်
ချောင်းဆိုးများအတွက်ရိုးရာကုစား - 13 အထိရောက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖက်ရှင်အကျီ - နွေဦးကို 2014 ခုနှစ်
သားအိမ်အလုပ်မဖြစ် - လက္ခဏာများ
မျက်စိကန်းကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?